Uhlelo lokusebenza lokubuka ividiyo ye-VR nemifanekiso. Xoxa nge-VR ebukhoma namantombazane aku-inthanethi nge-3D, 180, 360. Mahhala, iwebhu, i-Iphone, i-Android.
Amantombazane we-VR cam
Ingxoxo yevidiyo ehamba phambili ye-vr
Ingxoxo iyinsizakalo ebanda kunazo zonke yamantombazane yokusakaza nokwabelana ngokuqukethwe kwayo nabanye. Yabelana ngezintshisakalo zakho nomhlaba futhi uthole ababhalisile abasha!
Akudingekile ukuthi ubhalise engxoxweni, vele ubuke izithombe namavidiyo mahhala, akukho ukubhaliswa okudingekayo. Ngendlela, ukubuka ukubhaliswa kwemisakazo nakho akudingeki.
Ukusakaza bukhoma okungu-360
Bukhoma ingxoxo yevidiyo mahhala. Yenza umcebo wakho ngokusakaza okuqukethwe okubukhoma nokushicilela kungxoxo. Okuqukethwe kwakho kungaba ngumthombo onamandla ngempela weholo lakho elengeziwe.
Amakhamera we-VR Roulette
Jabulela ukuhlangana namantombazane ashisayo avela emazweni angama-170 eplanethi esebenzisa i-chatroulette yethu yevidiyo eku-inthanethi. Ubungani, uthando noma yini enye oyifisayo ku-U LIVE Chat! Gxila kokuqukethwe okuthandayo bese ukhohlwa yilokho ongathandi. Nge-U LIVE uzokhohlwa ngezinye izindlela zokuxoxa!
Amantombazane we-3D vr
Inombolo enkulu yezinketho zamavidiyo ezingatholakali kumawebhusayithi amaningi wengxoxo. Yonke imifudlana izotholakala kusukela ekuqaleni futhi uzokwazi ukukhetha ngqo okuthandayo kakhulu. Bamba iqhaza ku-roulette yengxoxo futhi uzijabulise ngemifudlana eminingi yezingxoxo zevidiyo. Hlangana namantombazane alungele ukufeza konke okufisayo.
Ukusakaza bukhoma kwe-VR
Xoxa ngevidiyo nabantu bakwamanye amazwe. Usuku nabesifazane abavela emazweni angaphezu kuka-170 engxoxweni, thatha noma ubani omthandayo! Zibandakanye engxoxweni emnandi nomunye wabahle bethu uxoxe mahhala noma ngabe uvelaphi. Khombisa izimpawu zokunaka - nikeza izipho futhi uhlele ukuhlela ukusakazwa kwangasese komuntu ngamunye - nge-U LIVE ngeke kube yinkinga ukujabulisa umuntu wesifazane!.
Amavidiyo we-VR ahamba phambili
Ngokubhaliselwe kwe-VIP uzokhohlwa nganoma yimiphi imikhawulo nemikhawulo. Misa ukubala imizuzu bese uthola ukuphumula okuphelele ngokubuka noma yikuphi ukusakazwa. Ngokubhaliselwe kwe-VIP, ungabuka ukusakazwa okuningi ngendlela ofuna ngayo. Futhi amantombazane afana nababukeli angajahi.